Thenga i-Spot Yakho: Uhlelo lokusebenza lwamadili weselula olwakhelwe umthengi | Martech Zone
NgoLwesine, July 24, 2014 NgoLwesithathu, July 23, 2014 Douglas Karr
Imivuzo yeselula, amadili weselula, amakhuphoni eselula, ama-imeyili… zonke lezi zinhlelo zokusebenza zinezici ezifanayo. Zonke ziyizicelo zohlelo lokusebenza ezikhathaza umthengi ngokungapheli ukuthi asebenzise amaphromoshini adonswa kuwo. Lokho kuhle kwabanye abathengi, kepha abathengi abaningi bamane bafuna ukusizakala ngamadili uma sebelungele. Lowo umqondo ngemuva Thenga i-Spot Yakho.
Ngiyalithokozela isu eliveza lolu hlelo ngoba linika amandla umsebenzisi esikhundleni sepulatifomu noma umthengisi. Umthengi angashayela izilungiselelo lapho abathengisi angathanda ukulandela khona nokuthi uyafisa noma ufisa nini ukuthola okunikezwayo. Okuhle kunakho konke - asikho isidingo sokuphrinta amakhuphoni, vele ubonise ivawusha yeselula ekuphumeni.
Abathengisi bakhokha imali ekhokhwa ngenyanga ngaphandle kwesabelo semali engenayo. Njengoba amadili akho engena kuhlelo lwe-Shop Your Spot, awudingi ukuzama ukushayela abasebenzisi ukulanda isicelo sakho. Lokho kusho ukuthi uyakwazi ukufinyelela kuwo wonke umsebenzisi we-Shop Your Spot… hhayi nje abantu obasunduzayo ukuze ubhalise. Igagasi elikhulayo liphakamisa yonke imikhumbi! Abathengi bavele balande ifayela le- Thenga uhlelo lwakho lweselula le-Spot futhi banokufinyelela kuzo zonke izindawo abazithandayo zokuthengisa kanye namadili abanikezayo.
Abathengisi bangaphatha uhlu lwabo lwamadili, babanikeze ngesikhathi sangempela, futhi babelane ngamadili amasha ngokushesha ngaphandle kwesidingo semvume noma ukuhlelwa njengamanye amapulatifomu adinga. Futhi, abathengisi bangalandelela yonke inqubekela phambili yabo nge analytics lokho kukala idatha yenzalo nokuhlengwa. Uma ungumthengisi futhi ungathanda ukuthatha i-Shop Your Spot ukuyivivinya - sebenzisa lapha.
Tags: Amadiliindawo-basedmappinguhlelo lokusebenza lweselulaamakhuphoni eselulaamadili weselulaokunikezwayo kweselulaamadili aseduzethenga indawo yakho